Falanqaynta isbeddelka horumarka mustaqbalka ee warshadaha xafiisyada Shiinaha
1. Dulmarka guud ee horumarinta warshadaha qalabka xafiisyada Xafiisyada xafiisku waa qalab kala duwan oo dadku u adeegsadaan waxqabadyada dhaqanka sida barashada, xafiiska, iyo nolosha guriga. Iyada oo horumarka joogtada ah ee dhaqaalaha iyo tikniyoolajiyadda, nooca qalabka xafiisyada sidoo kale si joogto ah ayaa loo cusbooneysiiyaa loona horumariyaa. Casriga st ...
Sidee loo doortaa gogol goyn wanaagsan iyadoo la fahmayo isticmaalka iyo astaamaha goynta gogosha?
1. Ujeedada iyo astaamaha gogosha goynta? Suufka goynta waa mid ka mid ah aaladaha ay tahay in ciyaartoyga tusaalaha warqadku ay qalabeeyaan. Gogosha goynta waa mid ka mid ah aaladaha ay tahay in ciyaartoyga tusaalaha warqaddu ay qalabeeyaan: a. Gogosha goynta ayaa ilaalin doonta daabkeeda waxayna dheereyn doontaa nolosha adeegga daabku; b. Cutti ...
On kor u qaadista kanaalka iyo dhismaha sumcadda warshadaha qalabka xafiisyada ee Shiinaha
Xiriirka ka dhexeeya soo saaraha iyo iibiyaha wuxuu ku sii nagaanayaa xiriir macaamil fudud, labada dhinacna waxaa ka maqan wada shaqeyn iyo isdhexgal istiraatiijiyadeed iyo heer sare ah. Natiijo ahaan, kheyraadka labada dhinac iskuma xirna hadafka astaamaha guud ee suuqa ma b ...